Go'aankii Hassan - Soo Bandhigida Xaqiiqada
Hassan waxa uu Somalia ka soo tahriibay 2003. Qaar badan oo ka mid ah asxaabtiisa iyo dariskiisa ayaa tahriibay si ay u galaan Yurub. Kuwa galay, waxay ka warameen nolol fiican marnaba kama hadlin wax dhibaato ah.
“Waxaan aaminsanaa in heerka nolosha Yurub uu yahay mid sareeya oo aan waxkasta ku heli doono bilaash” ayuu yiri. “Waxaan qaatay nasiib maadaama aanan ogayn waxyaabaha aan kala kulmi doono tahriibka. Waxaan aaminsanaa mar haddii aan Yurub gaaro in aan heli doono nolol shidan oo degan oo wanaagsan” ayuu ku daray.
Markii uu ka soo baxay Somalia, waxa uu soo gaaray Ethiopia halkaasoo uu si sharci daro ah uga samaystay baasaboor Ethiopian ah kaasoo u fududeeyay in uu si sharci ah ku galo Sudan halkaasoo uu xiriirkii ugu horeeyay la sameeyay muqalasiinta. Waxay u sheegeen in safarka Libya uu qaadan doono saacado oo uusan wax dhibaato ah lahayn balse waxa uu qaatay maalmo.
Dhagayso Hassan oo ka waramaya safarkii Libya.
Hassan iyo soo galooti kale ayaa Libya doon laga saaray ku wajahan Talyaaniga. Muqalasiintu waxay cabirka siiyeen mid ka mid ah rakaabka oo sheegtay in uu yaqaano sida loo kexeeyo doonta. Afar maalmood ayay doontu ku jidhay badda. Cuntadii iyo shidaalkii waa yaraadeen oo xiligaas doontu badda way iska dul sabaynaysay. Waxay ahaayeen kuwo go’doon ah.
“Waxkasta waxay ahaayeen si lama filaan ah” ayuu yiri “Xaaladu waxay isku badashay saacad ba saacad. Hirarku waa dheeraayeen, xaaladu waxay noqotay mid adag, walwalka ayaa siyaaday. Dadku waxay isku diyaariyeen dhimasho.” ayuu ku daray.
Nasiib wanaag, waxaa badbaadiyay markab laga leeyahay Malta oo geeyay Malta.
Dhagayso Hassan oo ka waramaya safarkii badda.
Qalbijab, isaga iyo soo galootigii kale waa la xiray oo waxaa la geeyay xero qaxooti halkaasoo ay ku sugnaayeen 45 maalmood.
“Waxay nagu xireen nambaro sida xoolaha, qofkasta nambar ayuu lahaa” ayuu yiri. “Xerada waxaa naloo soo dhaweeyay sidii maxaabiis, waxaa na ilaalinayay milatari iyo boolis.”
Soo dhaweyntii Malta ayaa qalbiga ka jabisay Hassan. Waxa uu aad ugu baahi qabay maalinta la sii daynayo. Maalintii la sii daayay waxaa loo sheegay in uu fasax yahay. Waxa uusan ogeyn in ay taasi ahayd bilowga xaalado adag oo lama filaan ah.
“Markii nala sii daayay nolosha waaba sii adkaatay, waxaa naloo sheegay in aan xoriyad haysano oo aan si xor ah u socon karno” ayuu yiri. “Laakiin nalama siin wax deegaan ah ama ma aanan shaqayn karin.”
Ka dib dhowr tijaabo, Hassan waxa uu helay shaqo. Waxay ahayd shaqo adag oo xaaladeedu adagtahay isla markaana mushaarka uu yaryahay.
“Rajadii Yurub ee ahayd meel dadku xoriyad haystaan oo ay akoono uga furanyihiin bankiyada oo darbiyada lacagta kala baxa waxay noqotay mid qarsoontay” ayuu yiri Hassan.
Ugu dambeyntii cadaadis badan iyo baahida uu u qabay in uu helo “Yurubta” uu ku rajo-weynaa ayuu hassan isaga tagay Malta.
“Malta ma noqon Yurub. Balse waxaan doonayay Yurub” ayuu yiri.
Ka bixitaankii Malta ayaa noqday bilowgii halgan dheer. Waxa uu safar ku maray wadamo kala duwan isaga oo raadinaya nolol fiican. Markii hore waxaa u duulay Switzerland, ka dibna waxa uu tareen u raacay Norway halkaasoo uu magangalyo ka dalbaday. Sideed bilood ka dib, codsigiisii magangalyada waa la diiday, isagoo u dhaqaaqay dhinaca Sweden ka dibna uga sii gudbay Ireland isagoo doonayay in uu soo galo UK. Balse waxaa lagu xiray Ireland iyagoo dib ugu celiyay Malta.
Markii uu Malta soo gaaray isaga oo niyad jabsan balse wali rajo qaba, ayuu shaqo bilaabay oo lacag meel dhigtay. Waxa uu aaminay in nasiib darada ay u sababtay in uusan sharci degaansho haysan isla markaana uu u baahanyahay in uu adkayso inta uu sharciga ka helayo.
“Waxaan aaminsay in sharci daradu ay iga hortaagnayd nolosha degan, ee xorta ah taasoo aad ku qarqayso lacagta oo aad waxkata ku helayso bilaash” ayuu yiri Hassan.
Dhagayso Hassan oo ka waramaya halgankii Yurub.
Ugu dambeyntii waxa uu helay sharci hal sano ah isagoo isla markiiba isku dayay in uu markale dib u galo UK. Waxa uu dib ugu safray Ireland isagoo markaan diyaar la’ ah dhamaan warqadaha muhiimka ah waana ku guuleystay in uu galo.
Ireland waxa uu uga safray magaalada Glasgow ee Scotland halkaasi oo uu magangalyo ka dalbaday. Afar isbuuc ka dib ayaa la siiyay sharci deganaansho.
Maanta Hassan waxa uu taksiile ka yahay London.
“Sawirkii aan ka haystay Yurub, hada ma jiro” ayuu yiri. “Sawirkii Yurub ee ahaa in waxkasta bilaash yihiin oo noloshu fududahay. Sawirkaas hada ma jiro.”
Isagoo dib u milicsanaya tahriibkii, ayuu Hassan dareemayaa in uusan u qalmin halganka iyo waqtigii ka lumay. Waxa ay ku qaadatay sanado in uu sharci helo isagoo ka dibna ay ku adkaatay in uu shaqo helo. Markii wadamba wadan u dhiibay, waxa uu dareemay kelinimo isaga oo aan haysan cid taageero dhaqaale siisa.
“Nolosha xitaa waa adagtahay marka aad sharci haysato, wax bilaash ah ma jiraan” ayuu yiri. “Markii aan imid Yurub qof qiimo leh ma aanan ahayn maadaama aanan aqoon lahayn. Waxaan ka soo cararay wadankayga dhibaato darteed hadana waxaan ku dhibaateysanahay Yurub”
Taariikhda wareysiga: 26 June 2015 | Taariikhda la badalay: 15 April 2016 |
Wareysi qaade: Fuad Muhamed Sharif | Qoraaga: Christa Awuor Odinga + Reem Al Salem | Muuqaal soo saaraha: Viktor Nordenskiöld